Webflow: Dhizaini, Prototype uye Kutanga Dynamic, Inopindura Mawebhusaiti | Martech Zone
Webflow: Dhizaini, Prototype uye Kutanga Dynamic, Inoteerera Mawebhusaiti
Svondo, Nyamavhuvhu 14, 2016 Douglas Karr
Kuchengeta waya chinhu chekare here? Ndiri kutanga kufunga saka sefungu nyowani reWYSIWYG isina makodhi, kudhonza uye kudonhedza vapepeti vava kurova musika. Zvemukati manejimendi masystem anoratidzira iwo maonero kumushure-kumagumo uye imwe kumberi-kumagumo inogona kushaya basa. Ehe… pamwe kunyangwe WordPress kutoti vatanga kubata.
Vanopfuura mazana matatu nemakumi masere evakagadziri vakavaka pamusoro penzvimbo mazana mana mazana mashanu ezviuru zvine Webflow. Iyo webhu dhizaini yekushandisa, yemukati manejimendi sisitimu, uye yekumisikidza chikuva zvese mune imwechete. Izvi zvinoreva kuti vagadziri vari kunyatso kuvandudza kodhi panguva imwe chete - uye mhedzisiro yacho inogadzirirwa otomatiki marongero anodavirira.
Zvidimbu zveWebhu zvinosanganisira:
Mugadziri Asina Kodhi - Webflow inonyora yakachena, semantic kodhi yako iwe kuti iwe ugone kutarisa pane dhizaini. Kutanga nekara isina chinhu yekutonga izere yekugadzira, kana tora template kuti utange nekukurumidza. Nezvirongwa zvavo zveprimiyamu, unogona kutumira nyore nyore yako HTML neCSS kuti ushandise sezvaunoda.
wirirana Design - Nyore kuvaka tsika inotaridzika pakombuta, piritsi, uye nhare (mamiriro uye mufananidzo). Yese dhizaini shanduko iwe unoita macascad kune zvidiki zvishandiso otomatiki Tora kutonga kwese kuputsika, saka yako saiti inotaridzika pixel-yakakwana pane zvese zvigadzirwa.
Mifananidzo uye kudyidzana - Uyai nekukanya, kuyengerera, uye nemitoro yekudyidzana kuhupenyu isina kodhi ine mifananidzo iyo inoshanda mushe pane chero chishandiso uye kune chero yazvino browser.
Zvigadzirwa zvakagadzirwa - Navigation, slider, tabo, mafomu uye lightboxes zvakagara zvakavakwa, zvinoteerera zvakakwana uye zvinosanganisirwa nekwanisi yekutora zvinotungamira uye mhinduro kunze kwebhokisi.
Ecommerce uye Kubatanidzwa - Zvigadzirwa zvakasanganiswa zvinosanganisira Zapier uye Mailchimp. Gadzira yako yekumberi uye bata yekutenga ngoro uye kubhadhara neyechitatu-bato maturusi senge Shopify.
Templates - Sarudza kubva pamusoro 100 bhizinesi, portfolio, uye blog matemplate kuti iwe unogona kugadzirisa mukati meWebhuflow.
Kubata uye Backups - Shandisa dura renzvimbo ine otomatiki uye emabhuku backups, chengetedzo yekutarisa, staging uye kugadzirwa dhatabhesi, uye yakakwira-inoita peji mutoro kumhanya.
Tutorials - Webhu kubuda nzvimbo yekubatsira inopa akawanda makosi ekuti utange iwe uye-mune-yakadzika tutorials kuti ikubatsire iwe kunze, pamwe ne foramu uye mashopu.
Sign up kune Yemahara Webhu yeAccount
Tags: cmsecommerce prototypezvikabvawiriranawirirana pataniinoteerera prototypeinoteerera prototypingshopifywebhu kuyerera
Lumanu: Tsvaga Vanokanganisa uye Tsvaga Anogonesa Zvemukati